I-china DVD CD player mini player ephathekayo ye-dvd player ene-BT FM USB speaker speaker abakhiqizi nabahlinzeki | Sanjin
Isidlali seDVD CD mini isidlali esiphathwayo se-dvd esisebenza nge-BT FM USB speaker
I-Wireless Gatway enenethiwekhi APP I-APP yamahhala yokuxhuma okukude kwe-smartphone / tablet ； Ngaphandle, smart endlini
Ngokwezifiso: Ubuncane. I-oda: Izingcezu eziyi-1000
Ukuphepha Shintsha Isici
Ukuvikela noma yiziphi izingozi ezingafuneki kude nengane noma ukusetshenziswa kabi komkhiqizo, inguqulo ye-MTDVD-Lite ineswishi yokuphepha eyakhelwe ngaphakathi, ivumela umshini ukuthi unqamule amandla uzivale ngokushesha. Iswishi yokuphepha itholakala ekugcineni komshini okubonakala kalula.
I-Flash Drive (USB) Imprint Yedatha
I-MTDVD-Lite iqukethe isici seDatha Imprint (Copy) esivumela abasebenzisi ukuthi bakopishe amafayela kusuka ku-DVD Disc baye ku-Flash Drive njenge-USB Memory Stick. Noma kunjalo, amafayela kufanele abe kumafomethi afundeka ngomshini.
I-HDMI ne-AV Compact
I-MTDVD-Lite inemiphumela emibili eyinhloko engaxhuma kudivayisi yangaphandle.I-HDMI inokuxhumeka okusheshayo, kanti izintambo ze-AV zixhumeke ngokunemba kakhulu.
Isici sokudlala singadlala nomaphi lapho abasebenzisi beme khona okokugcina (Ama-Shuts TV noma i-DVD Player), lesi sici songa imizamo eminingi yomsebenzisi ekugcineni.
Ngomklamo oyingqayizivele weMaite Electronics, iMTDVD-Lite yakhiwe ngepulasitiki eqinile nensimbi ezansi komshini ngakho-ke lokhu kunikeza ukumelana nokushaqeka.
"Kushesha futhi impela"
Ngama-chip kusengaphambili avela kwa-SunPlus, umshini awugcini nje ngokuba isisindo esincane futhi esilula kepha futhi ushesha ngokweqile ngejubane lokufunda oluthatha kuphela phakathi kwamasekhondi ayi-8 noma ngaphansi.I-Maite Electronics ifuna ukuba neqiniso kumakhasimende ethu futhi inikeze imiphumela yokuhlola enembile kakhulu. umsindo wokufunda ungaphansi kuka-30 dB.
10W ikhwalithi ephezulu ye-DC5V-2A, ugesi ophephile we-USB-MICRO
I-chip eyinhloko yebhodi le-decoder yi-SUNPLUS8203R, esekela ukumiswa kabusha nokudlalwa kwama-CD ahlukahlukene alalelwayo (CD, MP3, WMA)
Sekela ukumiswa kwamagama we-USB nokudlala futhi
Ukunyakaza kwe-SANYO HD850
Okukhishwa komsindo we-headphone kwe-3.5
Ukusekela umsebenzi womsakazo we-FM (ukusekela ukusesha okuzenzakalelayo, ukukhiya okuzenzakalelayo, ukulondoloza okuzenzakalelayo)
Sekela ukudlala kwe-Bluetooth
Ukusekela ukudlala kwe-loop
Isekela umsebenzi wokuphinda
Umkhiqizo womsindo wesipikha owakhelwe ngaphakathi 1 * 2W
Ukusekela ukushisa i-MP4, i-CD, i-MP3 ne-USB
Ukusekela amandla ukuvala ukudlala imemori
I-LOGO ingenziwa ngezifiso ngokuya ngamakhasimende
Ulimi lwemenyu luzenzakalelayo ngokwalokho okudingwa yikhasimende
Kufakwe isilawuli kude
Ububanzi bemvamisa yomsindo: 65Hz ~ 20KHz
Kukalwe Impedance: 6Ω
Ifomethi yomsindo we-U-Disk: MP3, WMA, CD
Uhlelo lwefayela le-U-Disk: FAT32
Transmission Ibanga: 10M
Langaphambilini Ikhamera ngaphandle kwendlu yekhamera ye-wirelss surverillance system cctv ngokulawulwa kohlelo lokusebenza
Olandelayo: I-all-in-one karaoke jukebox 15.6 ”i-amplifier eyakhelwe ngaphakathi ene-uhf microphone engenantambo nesipika